ညီရဲသစ်: အစရှိ အနောင်နောင်မို့ အကျင့်ပါသွားမှာကို စိုးမိတယ်
Posted by ညီရဲသစ် at 00:51
Anonymous 25 January 2013 at 01:47
ဘလက်ရေ အရမ်းကောင်းတာ လူငယ်လေးတွေဒါလေးဖတ်မိရင်ကောင်းမှာနော်
စာရေးတာဝမ်းသာတယ် သူငယ်ချင်း သတိလည်းရတယ် အဆင်ပြေတယ် ဟုတ်
SHWE ZIN U 25 January 2013 at 07:27
ညီလင်းသစ် 26 January 2013 at 07:29
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမတစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်ပြီးရင် ဒုတိယ၊ တတိယဆိုတာ မခဲယဉ်းတော့လို့ မကောင်းမှုဆိုရင် မစမိတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ..၊
အချီအချ ဒိုင်ယာလော့ဂ်တွေနဲ့ ဇတ်ရှိန်ကို တဆင့်ချင်း မြှင့်ယူသွားတာမို့ တစ်ပုဒ်လုံးဟာ ညက်ညောနေခဲ့တယ် ကိုညီရဲ...။
စံပယ်ချို 26 January 2013 at 16:03
မကောင်းမှုကို မစ တာအကောင်းဆုံးပါပဲ ဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးပြတတ်တယ်
San San Htun 27 January 2013 at 10:55
ကျောင်းပြေးချင်တယ့် ကလေးတွေကို ဖတ်ခိုင်းရမယ်..
Han Kyi 27 January 2013 at 14:40
ဟုတ်တယ်...မကောင်းတာဆိုရင် အစမလုပ်တာ အမှန်ဆုံးနည်းလမ်း...သို့ပေမင့် မသိလို့ မလုပ်တာထက် ဆိုးကျိုးတွေကို နားလည်ပြီး မလုပ်တာမျိုးဖြစ်အောင် လူငယ်တွေကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့က လူကြီးတွေရဲ့ တာဝန်...လူကြီးတွေကို ကြောက်ပြီး အစမလုပ်တာဆိုရင်တော့ ကောင်ကျိုးဆိုးပြစ်ကို နားလည်တာမျိုးမဟုတ်လို့ အစလုပ်မိရင် အနောင်နောင် ဖြစ်မှာ သေချာနေရော...
နေ၀သန် 28 January 2013 at 17:30
အစ်ကိုရေ... ကောင်းလိုက်တာ.... :)
roseayemaung7February 2013 at 09:51
အလင်းသစ် 16 March 2013 at 05:36
ကျောင်းပြေးရင် အိမ်လယ်တိုင်ကိုဖက်ခိုင်းပြီး ရိုက်တတ်တဲ့ အမေ့ကို သတိရတယ်.... နွားနဲ့ဖက်ရုန်း ခြေသလုံး သမန်းချေးတက်မှ ထမင်းနပ်မှန်တဲ့ ဘဝထဲ နင့်ကိုမမြင်ချင်လို့ပါ သားကြီးရဲ့လို့ ငိုသံပါနဲ့ ရိုက်တတ်တဲ့ အမေ့ကို လွမ်းမိသွားတယ်အကို.....
Anonymous 19 April 2013 at 13:29
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) 19 May 2013 at 15:48
ဘဝနဲ့ရင်းပြီးရတဲ့သင်ခန်းစာကို ဖြန့်ဝေလိုက်ရတယ်ဆိုတာ ထိုလူငယ်လေးမှ သဘောပေါက်ပါ့မလားလို့ မြတ် အတွေးနယ် ချဲ့နေမိတယ်။
ဝတ္တုတိုကလေးက တိုတိုလေးနဲ့ ထိထိမိမိရှိလိုက်တာ။
သိ င်ျဂါ ရ7September 2013 at 09:13
မကောင်းဘူး လို့ သိထားတဲ့ အရာတွေ က အစ မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲလေ ... အိမ်လည်နည်းတာ | နောက်ကျတာ ... ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ် ညီ ...
Anonymous6June 2014 at 15:03
Personal injury lawyers can help your negligence case
if you have purchasedanew invention that has causedafire or had another damaging effect.
Also visit my weblog :: Neinstein & Associates continue reading this..
မောင်သီဟ 18 August 2014 at 15:52
မွနျမာအတှကျဒျေါလာကိုးသိနျးတောငျကိုရီးယားထောကျပံ့ - မွနျမာနိုငျငံတှငျး လူသားခငျြးစာနာထောကျထားရေးအကူအညီတှဆေောငျရှကျဖို့အတှကျကုလသမဂ်ဂအဖှဲ့အစညျးတဈခုကိုတောငျကိုရီးယားနိုငျငံဟာအမရေိကနျဒျေါလာ၉၀၀,၀၀၀လှူဒါနျးခဲ့တယျလ...
ပိုကွောကျစရာ ကောငျးတယျ - ပွုံးမပွတတျတဲ့ မကျြနှာထကျ လိုအပျရငျမကျြနှာခြိုသှေးတဲ့ လိုပွုံးတှကေ ပိုကွောကျစရာကောငျးတယျ။ တဈယောကျတညျး အထီးကနျြရတာထကျ သာမှအတူနခေငျြတဲ့ အဖျောပွုခွ...
နှဦေးတျောလှနျရေး - ၁ - ဖဖေျေါဝါရီ ၁ ရကျနကေ့စလို့ မအိပျနိုငျ၊ မစားနိုငျ၊ မပြျောနိုငျ သတငျးတှကွေညျ့ပွီး ဒေါသထှကျ လူသတျခငျြ မဆဲတတျတဲ့လူတောငျ ဆဲတတျလာပွီ။ ဖဖေျေါဝါရီ ဒုတိယပတျ နယူးယေ...